Ikhefu kunye noQhagamshelwano · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
NgoDisemba 9, 2021 20:00 PM - 21: 00
« Liquid Rituals-izithuba zethiyetha ezizinzileyo zomdaniso
Imibhalo-ngqangi yoMzimba waNgaphandle X MeeM عَ Podcast »
Ngokufakela umdaniso, "I-Break & Connection" ivula indawo yokumisa kunye nokucamngca, oko, ngaphaya kwe-post-colonial, impembelelo yasentshona, ivula uxhulumaniso olwahlukileyo phakathi komntu kunye naye kunye nomnye.
"I-Break & Connection" ithatha iimpawu zexesha kwaye ikhanyise ukuphuka kunye nokudibanisa, ukuphuka kunye nokuqala okutsha kwiimbono ezahlukeneyo. Umzuzu wokuqhawula imikhwa emidala kunye nokuqiniseka, okwenzekayo nangona kunjalo, usebenza njengethuba lokuqwalaselwa okubalulekileyo kokuhlalisana koluntu. Ngalo mveliso, uGrupo Oito uhlola ikhefu njengomzuzwana wokuhlola ezinye izinto eziyinyani, ukuthatha iimbono ezintsha kunye nokuzibona ngokuhlukileyo: ukuqonda umyalelo nge-disorder, ukufumanisa okungabonakaliyo ecaleni kwezinto ezibonakalayo, ukuzisa ihlabathi kunye. kunye nezoMoya. Ngenxa yale njongo, iqela lijongene, umzekelo, izenzo zomoya kunye neendlela zokucinga. Ezi zibonisa iindlela zokuziva uqhagamshelwe kuwe ngendlela enzulu kwaye ngokunjalo nabanye abantu kunye nokusingqongileyo.
Nge "I-Break & Connection", i-Grupo Oito iyaqhubeka nomsebenzi wayo kwi-anti-racist kunye nezakhiwo ze-decolonial kunye nomxholo. Emva kokubuzwa kwesiqhelo esimhlophe kwakugxilwe kwi "Ubiquitous Assimilation", imveliso entsha inikezelwa ekukhangeleni oko kukudibanisa. Kule nto, into eqhelekileyo iyaphulwa kwaye iyabuzwa - nokuba ziindlela zokusebenza zangaphambili, izivumelwano zomdaniso okanye iimeko zentlalo kunye nezimo zengqondo zomntu.
Kwiholo eliphangaleleyo le-Oyoun, abaphulaphuli banokuhamba ngokukhululekileyo kwaye bafumane indlela yabo ngokudlala komdaniso. Uyilo lwesiteji lusasazwa kwigumbi njengofakelo kwaye luqukethe izinto ezivela kwiimveliso zangaphambili, ezithatyathwe kwaye zihlanganiswe apha. Abadlali, nabo, bahamba ngokukhululekileyo phakathi kwezinto zoyilo lweqonga kunye nabaphulaphuli.
◥ Amatikiti kunye nolwazi olungakumbi apha.
I-Choreography kunye nesikhokelo: uRicardo de Paula
Abadlali: uLaura Alonso, uCaroline Alves, uExocé Oob, uNatalie Riedelsheimer, uMiro Wallner, uRicardo de Paula, uCintia Rangel
Umncedisi womculo: Léna Sophia Bagutti
IDramaturgy: Katja von de Ropp
Ukukhanya: uRaquel Rosilden
Umculo: Biano Lima
Ubunjineli besandi: Makoto Inoue
Inqanaba: Andreina Vieira dos Santos, Zé de Paiva
Isinxibo: Andreina Vieira dos Santos
Ulawulo lweMveliso: IMIFRUSH Production (Micaela Trigo & Urszula Heuwinkel)
Umncedisi wolawulo lwemveliso: Laia Montoya
Ividiyo: Zé de Paiva & Kathleen Kunath
Amaxwebhu efoto: Tito Casal
Press kunye nobudlelwane boluntu: Felix Schnieder-Henninger
ISebe leSenethi leNkcubeko kunye neYurophu
INgxowa-mali yoBugcisa bokuSebenza ngeemali ezivela kuMkomishinala kaRhulumente we-Federal for Culture and the Media.
◥ E-Oyoun akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, ubutshaba obungaphaya, ubutshaba obudlulayo, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olunjengokuchasa abamnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasene nobuJuda kunye naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo yomntu wonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasa kwaye simelane. Ukuba kukho umntu okanye into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukukunceda! Ukuba ungathanda ukwabelana nathi ngamava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i E-mail okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu Iwebhusayithi.
Nge-9 kaDisemba ngo-2021